De Gea, Pogba, Wan-Bissaka… (Manchester United oo wajahaysa Liverpool iyadoo ay ka maqan yihiin siddeed ciyaaryahan) – Gool FM
(Manchester) 17 Okt 2019. Maamulka kooxda kubadda cagta Manchester United iyo Jamaahiirtooda ayaa helaya war aan u wanaagsanayn ka hor kulanka ay la leeyihiin naadiga Liverpool ee horyaalka Premier League.
Manchester United ayaa wajahaysa Liverpool iyadoo ay ka maqan yihiin siddeed ciyaaryahan oo ay ku jiraan De Gea, Pogba iyo Wan-Bissaka sida wararku ay sheegayaan.
Red Devils ayaa ku soo dhaweyn doonta garoonkeeda Old Trafford kooxda hoggaamineysa horyaalka Premier League ee Liverpool maalinta Axadda ah ee soo aaddan.
Siddeeda ciyaaryahan ee wargeysyada ciyaaraha qaarkood ay sheegayaan inay adeegooda wayn doonto Manchester United kulanka Liverpool ee Axadda ayaa waxa ay kala yihiin; De Gea, Pogba, Shaw, Wan-Bissaka, Martial, Jones, Bailly iyo Fosu-Mensah.
Maqnaanshiyaha xiddigahan ayey dharbaaxo xooggan ku noqon doontaa qorshaha tababaraha reer Norway ee Ole Gunnar Solskjær, ka hor kulanka muhiimka ah ee u muuqda inuu ku xirnaan doono mustaqbalkiisa tababarnimo ee garoonka Old Trafford.
Manchester United oo natiijooyin liita dhexda kaga jirta ayaa haatan fadhisa kaalinta 12-aad ee kala sarreynta horyaalka Premier League.